सकियो २८ अर्ब, मात्र ४२० घर निर्माण, कहाँ गयो पैसा ? - Everest Dainik - News from Nepal
सकियो २८ अर्ब, मात्र ४२० घर निर्माण, कहाँ गयो पैसा ?
काठमाडौं, ३ वैशाख । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, गैरसरकारी संस्थामार्फत वितरित अनुदानबाट मात्र चार सय २० भूकम्पपीडितले घर निर्माण सकेर छानो लगाएका छन् ।
अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्राधिकरणको २४ चैतसम्मको विवरणमा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा मात्रै गैरसरकारी संस्थाको सहित २७ अर्ब ७३ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । निजी आवास निर्माण कार्यविधिअनुसारको तीनै किस्ता जम्मा चार सय २० घरपरिवारले बुझेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब आठ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस तीन लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ता पाउन योग्य
याे पनि पढ्नुस प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले बुझाए दोस्रो स्पष्टिकरण
याे पनि पढ्नुस प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयमा कर्मचारी अभाव, ७० दरबन्दीमध्ये ५८ पद रिक्त
प्राधिकरणले ५ लाख ३४ हजार ५३ भूकम्पपीडित परिवारलाई पहिलो किस्तामा ५० हजारका दरले २६ अर्ब ७० करोड २६ लाख ५० हजार आवास निर्माणको अनुदान वितरण गरेको छ । दोस्रो किस्तामा ८२९ घरपरिवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले १२ करोड ४३ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । तेस्रो किस्ता भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म वितरण गरेको छैन । अहिलेसम्म २६ अर्ब ८२ करोड ७० लाख प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि खर्च गरेको छ । तर, तेस्रो किस्ता वितरण नभएकाले प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार कसैको पनि घर निर्माण पूरा भएको छैन ।
ट्याग्स: punarnirman pradhikaran